Pocket Play Amakhasino aku-inthanethi nokubuyekezwa kweselula
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se pocket play ku selula naku inthanethi
Isibuyekezo Se Pocket Play ku Selula naku Inthanethi
Isofthiwe:Big Time Gaming, ELK Studios, Evolution Gaming, Microgaming, NetEnt
Ibhonasi Lokukwamukela:100% kuze kufike ku-R3,000 Ibhonasi
100 Imijikelezo yamahhala
Njengoba igama lichaza, iPocket Play yasungulwa ngo-2020 njengekhasino elihamba phambili. Indawo inama-library amahle kunawo wonke emhlabeni adalwe kuma-studio ayi-12 afunwa kakhulu afaka iMicrogaming, NetEnt, Evolution, ne-Play ‘n Go, njll. Umtapo wolwazi mkhulu, ngaphandle kokuthwalwa imidlalo ejwayelekile . Ngempela ama-slots, imidlalo yamakhadi, izinguqulo ze-roulette, umthengisi obukhoma, kanye nemidlalo yokuwina esheshayo ibonakala ikhethwe ngesandla
I-Pocket Play Casino ibuye izigqaje ngendawo yokwamukela izivakashi ezinothile, ama-jackpots aqhubekayo. Abaqambi bemidwebo emisha yokuzalela indawo bakwazile ukufaka inkundla yemidlalo ngesimo sokuthula esidlula ubukhazikhazi obumnyama beVegas. Izithombe zomcebo bezilokhu zimbalwa, kepha ngokweqhinga, zisetshenziswa ngezithonjana zemidlalo ezimibalabala, ezigqama ngemuva kwesizinda esimhlophe. I-log in window, enqabayo ukuhamba, ayiphazamisi ngempela uma uskrolela phansi.
IPocket Play Casino inikeza indawo yokudlala elinganayo nephephile, lapho abadlali bangenza khona imidlalo abayithandayo ngaphandle kokucabanga ngezimo ezingaphandle. Yonke imidlalo ihlolwa njalo ukuthola imiphumela enobulungiswa noma ‘engahleliwe’, ngokusebenzisa umthetho olandelwayo we-RNG, ngabahloli abazimele. Ikhasino livikela imininingwane ebucayi yamalungu ngokusetshenziswa kwezicishamlilo ezi-encrypted ezisezingeni lomkhakha. Okunye okuhle ukuthi ukunakekelwa kwamakhasimende kuyatholakala izinsuku ezingu-24/7 365 ngonyaka.
2021 Amakhodi weBhonasi Okwamukela ePinnacle Casino
Idiphozithi Lokuqala I-100% ibhonasi efinyelela ku-R 3,000 nge-100 imijikelezo yamahhala
Amijkelezo yamahhala izodlalwa ku-Book of Dead. Inani lebhonasi kufanele libhejwe amahlandla angu-40 ngaphambi kokuthi kukhishwe noma yikuphi ukuwina. Ukunqoba kwemi-jikelezo yamahhala kukhonjelwe ekudlaleni okungu-10x.
Amakhodi Webhonasi elingena Diphozothi ePocket Play Casino
IPocket Play Casino ayinikeli ngebhonasi yediphozithi njengamanje.
Amanye Amaphromoshini Akhethekile Anikezwa yi-Pocket Play Casino
Ibhonasi yediphozi Ikhasino lizohlinzeka ngamabhonasi ediphozi ngezikhathi ezithile, angakhangiswa kuwebhusayithi, noma amalungu angamenywa nge-imeyili.
Ukubuyiselwa kwemali masonto onke IPocket Play ibhala phansi konke ukulahlekelwa komuntu siqu kwamasonto onke. Njalo ngoLwesihlanu, amalungu athola u-10% wakho konke ukulahlekelwa komuntu ngeviki eledlule.
Kufika ku-100 Imijikelezo Ye Pocket Amalungu athola imijikelzo yamahhala eyi-10, noma amaPocket Spins, ngawo wonke u-R 17,000 obhejwayo. Umkhawulo wePocket Spins ongawuthola ngu-100 ngeviki.
I-Pocket spin ngayinye ibiza u-R 1.70. Amabhonasi ediphozi ngokuvamile athwala i-40x, kuyilapho ama-spins wamahhala enqobayo kufanele abhejwe ama-10. Imali ebuyayo engaphansi kuka-R 1,000 inikezwa njengemali yebhonasi, ngesidingo sokubheja esingu-40x. Imali ebuyayo engaphezulu kuka-R 1,000 iza njengekheshi ngaphandle kwezibopho zokubheja.
I-log in window izoziveza kusibhengezo esikhulu uma ungenayo i-akhawunti okwamanje ePocket Play Casino. Chofoza ku-‘Dala i-Akhawunti ‘ukuze ubhalise. Kukhona izinkinobho ze- ‘Sign Up’ ne ‘Log In’ ngakwesokudla ngaphezulu, kepha kungenzeka ungaze usebenzise i. Faka imininingwane yakho yangasese; khetha iphasiwedi, nemali yakho, njengoba iwindi lokubhalisa likucela.
Lapho usuyemukele imigomo nemibandela futhi uthumela imininingwane, uzothola ikhodi yokuqinisekisa kuselula yakho. Faka leyo khodi ewindini lokubhalisa, bese i-akhawunti yakho izobe yakhiwe. Kusukela lapho kuya phambili, noma nini lapho ulayisha iwebhusayithi kusiphequluli sakho, uzofika ngqo ekhasini le-akhawunti yakho. Amathuba ukuthi, awusoze usebenzise inkinobho ethi ‘Ngena’.
Imidlalo Yekhasino eku-inthanethi Ungayidlala ePocket Play Casino
Ungadlala imidlalo ethile ethandwayo kusuka ePocket Play Casino, ucabanga ukuthi ivela kwizitudiyo zesoftware eziyi-12, eziqukethe ukhilimu wemboni yokuqukethwe yemidlalo. Ngaphandle kwama-studio okukhulunywe ngawo kwisingeniso, abanye abahlinzeki yi-Big Time Gaming, iPragmatic Play, i-Thunderkick, i-Elk Studios, i-Quickspin, i-No Limit City, i-Pariplay, ne-Relax Gaming.
Ohlotsheni lokuqala, wonke ama-lobbies emidlalo avela ngeqoqo elilinganayo phakathi kwekhasi eliyisiqalo. Lokhu kubonakala kulula okuqukethwe, futhi kubonakala kuyinoveli, uze ufune ukuguquguqula phakathi kwama-lobbies wemidlalo, ongeke ukwazi. Kepha uma uvele ufuna ukungena endaweni yokwamukela izivakashi bese uhlala lapho, ukumiswa okunjalo kungonga isikhathi esithile.
Uma uchofoza ku-‘Midlalo ‘ngenhla kwesibhengezo esiyinhloko, uthola amageyimu athi’ Konke ‘, lapho ungahlunga khona izihloko ngama-alfabhethi. Izihloko ezithile zingahlungwa ngomugqa wokusesha. Ungafaka futhi ama-lobbies emidlalo abahlinzeki abahlukahlukene ngokuchofoza kuma-logo abo kumephu yesayithi. Ingxenye enhle kunazo zonke ngaphandle kwemidlalo yomthengisi ebukhoma ingadlalwa kumodi yedemo
Spina Amasondo Akhathekile
Kuyavunywa, ungayidlala le midlalo kwamanye amakhasino amaningi, kepha ePocket Play, akudingeki ulwe nokujwayelekile. Indawo yokwamukela izivakashi ePocket Play Casino ihlukaniswe izigaba ezi-4: Classic slots, iMegaways, i-Book games, nazo zonke ezinye izikhala zamavidiyo. Nayi eminye imidlalo ‘Enconyiwe’: URich Wilde ne Book Dead, Starburst, Fruit Shop Megaways, Bushido Ways xNudge, Gonzo’s Quest, Loco the Monkey, Divine Fortune Megaways, Reactoonz 2, Dinopolis, Big Fin Bay, neDinosaur Rage.
Hlala Kumatafula Wakho Wesilwane
Kuyaye kuthiwe abadlali bekhasino abakhulu batholakala ematafuleni. IPocket Play Casino ayinaso isigaba esikhulu semidlalo yetafula, kepha ungadlala yonke imidlalo yakho yamakhadi wesilwane ezinhlotsheni eziningi, nokuhlukahluka okuningi kwe-roulette. Zama amakhono akho nethemba losizo oluthile oluvela kuDame Luck emidlalweni efana neBlackjack Multihand, iBlackjack Royal Pairs, iBaccarat ejwayelekile, iBig Win Baccarat, iCasino Hold ‘Em, i-100 Bit Dice, iPunto Banco, ne-roulette enesiFulentshi, iYurophu, isiNgisi, nesi Imithetho yaseMelika.
Dlala kuzilungiselelo ze-Real Casino
Bambalwa abadlali abangahlangabezana nobungqabavu nobuhle bamakhasino wangempela. Ngakho-ke, ukukhuphuka kwemidlalo yabathengisi ebukhoma, nobukhulu bayo bezenhlalo. Akumangalisi ukuthi babe yisigaba esivamile sekhasino ngesikhathi sokurekhoda. I-Pocket Play Casino ihlanganise okuhlangenwe nakho okuhlukahlukene kwekhasino ngezinguqulo eziningi ezibukhoma ze-blackjack, i-baccarat, i-poker, i-roulette, njll., Kanye nemidlalo eminingi ye-TV efana ne-Monopoly ne-Football Studio, ngaphandle kwabanye.
I-5-Card Poker kuma-Consoles
I-Video poker ingahle ingadingi ukuthi ugcine ubuso be-poker, kepha amakhono we-poker anele angenza umehluko enanini olizuzayo, ikakhulukazi uma une-ambidextrous; zonke izinhlobo ze-poker ziza ngezandla ezilodwa neziziningi. IPocket Play Casino ine-video poker lobby yokuzinikela, kepha kunemidlalo emincane kunasemakhasino lapho ahlanganiswe khona nemidlalo yetafula: AmaJacks noma i-Better, amaJacks noma i-Better Multihand, iDucucus Wild Multihand, iJoker Poker, iJoker Poker Multihand, neJackpot Poker
Dlala Izintandokazi Zakho Zomphakathi
Indawo yokwamukela abanye Imidlalo igcwele isitayela se-arcade nemidlalo ethandwayo emphakathini edlalwa emibuthanweni nasemibuthanweni yomndeni; eminye idlalelwa ngisho nokuqongelela izimali. Le midlalo idlalwa ngokujwayelekile ngezigxobo eziphansi. Isici sokuzijabulisa sidlula kakhulu amanani asengozini. Le midlalo inikeza amakhasino aku-inthanethi isigaba esisha somdlali, nabalandeli amathuba amaningi okudlala le midlalo. Ku-Pocket Play ungazama i-Irish Bingo, i-Keno, i-Lucky Diamonds, i-Rainforest Magic Bingo, i-Ace ye-Spades, ne-Super Wheel, njll.
Lwela Inqubekelo Phambili Enkulu
Cabanga ukushaya i-jackpot yesibalo engu-6 noma engu-7 ngenkathi uzijabulisa. Kwenzeka ngokungavamile, kodwa kwenzeka. Abanye babahlinzeki bemidlalo banamanethiwekhi abanzi ama-jackpots aqhubekayo, lapho izinkulungwane zabadlali zibheja khona kusuka emhlabeni jikelele. Yize ungakwazi ukubona amanani abo amanje ngokuqondile, ungazama inhlanhla kuFruit Bonanza, Divine Fortune, Absolute Super Reels, Mona Lisa Jewels, Basic instinct, Mercy of the Gods, Imperial Riches, naseLucky Clover, njll.
IPocket Play Casino Yocingo: Iqhathaniswa Kanjani I-Pinnacle Casino Kumakhalekhukhwini?
Konke kumayelana nokudlala usohambeni, futhi uma uwina ngenkathi wenza ama-task amaningi, konke kungcono. Yilapho abaqhubi beza ngegama lekhasino. Kepha futhi kuveza ukuthi iPocket Play Casino iyipulatifomu yokuqala. Ikhasino ingafinyeleleka kuwo wonke ama-smartphones namathebulethi anamuhla asebenza ku-Android, Windows Phone, iOS, naku-Blackberry, njll. Konke okudingayo isiphequluli nokuxhumeka kwe-inthanethi okuzinzile ngaso sonke isikhathi kwazise uzobe udlala ku-inthanethi.
IPocket Play yekhasino ephathekayo inguqulo encane yesikhulumi se-PC, yize imile, njengoba opharetha efuna ukugcina zonke izinto zekhasi lasekhaya le-PC. Imidlalo yeselula idlalwa kahle kakhulu kumodi ye landscape, ngoba iningi lemidlalo linezakhiwo eziqondile. Eminye yemidlalo eyenzeka kakhulu ohambeni ihlanganisa iBeast the Beast: IGriffin’s Gold, Legacy of Riches, Shimmering Woods, Temple Tumble, Western Gold Megaways, Ring of Odin, and Riders of the Storm, nokunye.
Ngingayi Dawuniloda iPocket Play Casino kuselula yami?
Cha, awukwazi ukulanda iPocket Play Casino kuselula yakho ngoba alukho uhlelo lokusebenza lwekhasino lokudlala ungaxhunyiwe ku-inthanethi. Amakhasino edijithali anamuhla awasanikeli ngezinhlelo zokusebenza zeselula, futhi nePocket Play Casino akunjalo.
Izindlela Zediphozithi Nezokuhoxiswa Zamukelwa ePocket Play Casino
MasterCard Yebo Yebo -
EcoPayz Yebo Cha Kungakapheli amahora angu-24
Skrill Yebo Yebo Kungakapheli amahora angu-24
Neteller Yebo Yebo Kungakapheli amahora angu-24
Cash to Code Yebo Cha
MiFinity Yebo Yebo Izinsuku zebhizinisi eziyi 1-3
Much Better Yebo Yebo Izinsuku zebhizinisi eziyi 1-3
Jeton Yebo Yebo Izinsuku zebhizinisi ezingu 2-3
Net Banking Yebo Cha
Bank/Wire Transfer Cha Yebo Izinsuku zebhizinisi eziyi 3-5
Pocket Play Casino Inhlangano kanye Imininingwane Yokuxhumana
Opherethwe ngu: Deep Dive Tech B.V. E-mail: [email protected]
Inguqulo Engadawunolodiwe: Yebo Iwebhusayithi: Chofoza Lapha
Umtapo wolwazi omkhulu, osezingeni eliphakeme Amapromoshini Ambalwa
Abayi-12 babahlinzeki abafunwa kakhulu Ukuqhubeka okukhulu kakhulu akutholakali
Iphakethe lokwamukela elikhangayo Akukho ukwesekwa kwefoni
Amapromoshini wa Njalo I-Casino ihlose i-geography encane
Imidlalo Ye Dealer Ebukhoma
Ipulatifomu yokuqala yeselula
Ukuqoqwa kwama-jackpots acebile, aqhubekayo
Yini Eyenza I-Pocket Play Casino Ukhethe Oludumile Kubadlali BaseNingizimu Afrika?
Umtapo wolwazi ocebile futhi ohlukahlukene
Abayishumi nambili babahlinzeki bemidlalo abaphezulu kakhulu
Amapromoshini wa njalo
Okuhlangenwe nakho kwangempela kwekhasino ngemidlalo ebukhoma
Ithuba lokuwina amanani 5,6,7 aqhubekayo
Ipulatifomu yokuqala yokudlala yeselula
Izikhalazo ze Pocket Play Casino yase Ningizimu Afrika
Imikhawulo eminingi yezwe
Ingabe iPocket Play Casino isemthethweni eNingizimu Afrika?
Imithetho yaseNingizimu Afrika ayiwavumeli amakhasino aku-inthanethi ukuthi anikeze ngezidingo zawo kubahlali abahlala khona. Kodwa-ke, iziphathimandla azibhekisi kubantu baseNingizimu Afrika abadlala kumakhasino asolwandle.
Ngikhipha Kanjani Imali ePocket Play Casino?
Ngena ngemvume ku-akhawunti yakho ePocket Play Casino bese uchofoza isithonjana samadola nezinhlamvu zemali. Umphathi wemali lona. Okokuqala hlola ukuthi unawo yini amabhonasi asebenzayo. Uma kungenjalo, chofoza ku-‘Donsela ‘bese ukhetha inketho yakho yokukhokha nge-e-payment. Faka inani ofisa ukulikhipha, kanye ne-imeyili yakho, bese ushaya u-‘Ukuhoxiswa ’ngezansi. Uzothola iposi eliqinisekisa ukwamukelwa kwesicelo sokuhoxa.
Yini iPocket Play Casino?
IPocket Play Casino yinhlangano enelayisense edijithali, enikeza imidlalo yekhasino yabadlali ukubheja ngemali yangempela. Abadlali bangabhalisela ukubheja kumaslots, imidlalo yamakhadi, i-roulette, i-video poker, imidlalo yokuwina ngokushesha, nemidlalo yabathengisi ebukhoma. Ikhasino inikeza ukukhushulwa okuhlukahlukene ukukhuthaza amalungu ayo ukuthi abeke ukubheja kwemali yangempela. IPocket Play iphethe ilayisense kuHulumeni waseCuracao.
Ngubani ophethe i-Pocket Play Casino?
IPocket Play Casino iphethwe futhi iqhutshwa yiDeep Dive Tech B.V., okuyinkampani enehhovisi elibhalisiwe eFransche Bloemweg 4, eCuracao.
Ingabe i-Pocket Play Casino inezici zokubheja kwezemidlalo?
Cha, iPocket Play Casino ayifaki incwadi yezemidlalo.
Ingabe i-Pocket Play Casino Inikela ngohlelo lwe-VIP?
IPocket Play Casino ayifaki uhlelo lokwethembeka noma iklabhu ye-VIP njengamanje.
Iziphi Izidingo Zokubheja ePocket Play Casino?
Amabhonasi ediphozi ngokuvamile athwala isibopho sokubheja esiphindwe ka-40 inani lebhonasi, ngaphandle kwalapho kuchazwe ngenye indlela. Ukuwina kwamahhala kufanele kudlalwe izikhathi eziyi-10 ngaphambi kokuthi kukhishwe imali. Imali ebuyiswayo engaphansi kuka-R 1,000 inikezwa njengamabhonasi, nawo aphethe ukubheja kuka-40x.